မလေးရှား ဆီအုန်း ကုမ္ပဏီများက မူးယစ်ဆေးဖတြ်ထားသူများနှင့် အကျဉ်းသားများကို ငှားရမ်း အသုံးပြုဖို့ စီစဉ်
တရုတ်တိုက်လေယာဉ်များစွာ ထိုင်ဝမ် လေပိုင်နက်အတွင်း ဝင်ရောက်
Posted in political on Sep 11, 2020.
တရုတ်နိုင်ငံ တိုက်လေယာဉ်များစွာ ထိုင်ဝမ် အနောက်တောင်ပိုင်း လေပိုင်နက်အတွင်း ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ထိုင်ဝမ် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောဆိုခဲ့ပြီး ယခု လုပ်ရပ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ မြို့တော်ဂျာကာတာမှာ နေ့စဉ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်လူနာ အသစ်တွေ ဆက်လက်မြင့်တက်နေတာကြောင့် ခပ်ခွာခွာနေခြင်း စည်းကမ်းတွေကို ပြန်လ
ဂျာကာတာမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုနှုန်း ဆက်လက်မြင့်တက်နေတာကြောင့် ခပ်ခွာခွာနေခြင်း စည်းကမ်းတွေ ပြန်လည်တင်းကြပ်လာ။
နယ်စပ်မှာ သနေတ်ပစ်ဖောက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြောင်း အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ် အပနြ်အလှန် စွပ်စွဲ
ICC ရှေ့နေကို အမေရိကန်က အမည်ပျက် စာရင်းသွင်း
ပါလာယုနိုင်ငံက အမရေိကန်ကို စစ်အခြစေိုက်စခန်း လာရောက်တည်ဆောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်
ဘီလာရုစ် အရေး ကုလသမဂ္ဂက ကြားဝင်ပေးဖို့အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် တောင်းဆို
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ရေပေးဝေမှု ပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့် သုံးစွဲရေ ပြတ်လပ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကွာလာလမ်ပူအပါအဝင် ခရိုင် ၇ ခုကို ရေထောက်ပံ့မှု အပြည့်အ၀ ပြန်လည်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ တရားဝင်ရေပေးဝေရေး
ဒီနေ့ စက်တင်ဘာ ၉ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့မှာ Brand New ကားတစ်စီး Surprise လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ နေတိုး ဒီနေ့ စက်တင်ဘာ ၉ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့မှာ Brand New ကားတစ်စီး Surprise လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့
1.Leakသွားတဲ့အခန်းတွေကို ထုတ်လွှင့်ချိန်မှာ ဖြတ်ထုတ်ပစ်နိုင်တယ်။ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ကို ဆက် မရိုက်ဖို့ဖိအားပေးစေနိုင်တယ် သို့ မူလရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်သံတွေအကုန်ဖျက်သိမ်းခံရသွားစေနိုင်တယ် ။ ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေကအ
အိန္ဒိယက မတ်ပဲတန်ချိန် နှစ်သိန်းခွဲ တိုးမြှင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်ခငြ်းကြောင့် ပညြ်တွင်းမတ်ပဲစျေး တစ်တန်လျှင် ကျပ် တစ်သိန်းကျော်ခုန်တက်ခဲ့ပြီး မတ်ပဲ FAQ တစ်တန်လျှင် ကျပ် ၁၂၃၀ဝ၀ဝ ဝန်းကျင်အထိ ရှိလာကြေ
1-ပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်အပြီး တစ်လအကြာတွင် ဘေရွတ်ဆိပ်ကမ်း၌ မီးလောင်မှုထပ်ဖြစ်ပြန်
Posted in crime, Other contest on Sep 11, 2020.
2-ကိုဗစ်ကာလစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့် အနှိပ်ခန်းဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်သူများကို ဖမ်းဆီး
Posted in crime on Sep 11, 2020.
3-Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းချက်များ လိုက်နာခငြ်းမရှိသည့် KTV/Bar ၁၀ ဆိုင်၊ အနှိပ်ခန်း ၈ ခန်း၊ ပညြ့်တန်ဆာအိမ် ၂ အိမ်နှင့် တရားခံ ၂၀၅ ဦးတို့အရေးယူထား
4-ကိုဗစ်ကာလ စည်းကမ်းမလိုက်နာသည့် အနှိပ်ခန်းဖွင့်လှစ်သူနှင့် အဖွဲ့များကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ
အထည်ချုပ်(ချုပ်ပြီးအထည်)သည် ပို့ကုန်ကဏ္ဍ၌ အတိုးတက်ဆုံးဖစြ်ပြီး လက်ရှိ ဘဏ္ဍာနှစ် တစ်လခန့်တွင် တင်ပို့မှုတန်ဖိုး ဒေါ်လာသန်း ၃၂၀ ကျော်ရှိပြီး ယခင်နှစ် ကာလတူထက် ဒေါ်လာသန်း ၄၀ ခန့်ပိုမိုရရှိ ထားကြောင်း စီး
Posted in economic, Other contest on Sep 11, 2020.
ပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်အပြီး တစ်လအကြာတွင် ဘေရွတ်ဆိပ်ကမ်း၌ မီးလောင်မှုထပ်ဖြစ်ပြန်
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့က ပြင်းထန်တဲ့ ပေါက်ကွဲမှုကြီးတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လက်ဘရွန်နိုင်ငံ ဘေရွတ်ဆိပ်ကမ်းမှာ ကြာသပတေးနေ့က မီးလောင်မှုထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုမီးလောင်မှုဟာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာ အဖျက်အမှောင့်လုပ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖစြ်စဉ်ကြောင့် နယ်စပ်တွေ ပိတ်ထားရတဲ့အတွက် ပညြ်ပ အလုပ်သမား ပတြ်လပ်မှုနမှေုနဲ့ရင်ဆိုင်နရေတဲ့ မလေးရှား ဆီအုန်းကုမ္ပဏီတွဟောကိုမူးယစ်ဆေးဖတြ်ထားသူတွနေဲ့ အကျဉ်းသားတွကေို လုပ်သားအဖစြ်ခေါ်ယ
Posted in Breaking News, Other contest on Sep 11, 2020.
ကောက်တွေ့ခဲ့တဲ့ အိုင်ဖုန်းကို ပိုင်ရှင် ပနြ်မပေးဘဲ ယူဆောင်ထားတဲ့ အမျိုးသား ဒဏ်ရိုက်ခံရ
စင်ကာပူနိုင်ငံ Ang Mo Kio ခရိုင်ရှိ HDB တိုက်ခန်းတွဲအနီးက မကြ်ခင်းပငြ်ပေါ်မှာ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀ဝဝ တန်ဖိုးရှိ အိုင်ဖုန်းတစ်လုံး ကျကျန်နတောကို အမျိုးသားတစ်ဦးက တွေ့ရှိခဲ့ကာ ပိုင်ရှင်ကို ပနြ်လည်ပေးအပ်ခငြ်း
Posted in Other contest on Sep 11, 2020.
ထိုင္း ဆေးရုံတစ္ခုမွာ လူငယ္ဂိုဏ္းႏွစ္ဖြဲ႔ ရန္ပျြဲဖစ္ပြား
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Phetchaburi ပြည်နယ်ရှိ ဆေးရုံတစ်ရုံမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ( စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ ) က လူငယ်ပြိုင်ဘက် ဂိုဏ်းနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ ရန်ပွဲကြောင့် ဆေးရုံရဲ့ အရေးပေါ် ကုသခန်းဟာ စစ်မြေပြင်တစ်ခုလို ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ... Read more!
သီရိင်္လကာ ကမ်းလွန် ပင်လယ်ရနေက်ပိုင်းသို့ ဆွဲခေါ်ထားခဲ့တဲ့ ဆီတင်င်္သဘောကြီး ထပ်မံ မီးလောင်
ရနေက်ပိုင်းသို့ ဆွဲခေါ်ထားခဲ့ရတဲ့ ရနေံစိမ်း စည် ၂ သန်းတင်ဆောင်ထားတဲ့ ဧရာမဆီတင်င်္သဘောပျက်ပေါ်မှာ မီးလောင်မှုထပ်ဖစြ်ခဲ့တာကြောင့် ငြိမ်းသတ်ခဲ့ရကြောင်း သီရိင်္လကာ ရတေပ်က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(စက်တင်ဘာ ၉) မှာ ပြောဆ